Arsenal 2-0 West Ham: Martinelli iyo Smith Rowe oo Gunners ka caawiyay kaalinta afaraad ee Horyaalka | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Arsenal 2-0 West Ham: Martinelli iyo Smith Rowe oo Gunners ka caawiyay...
Arsenal 2-0 West Ham: Martinelli iyo Smith Rowe oo Gunners ka caawiyay kaalinta afaraad ee Horyaalka
Gabriel Martinelli iyo Emile Smith Rowe ayaa qeybtii danbe ee ciyaarta goolal u dhaliyay kooxda Arsenal oo 2-0 kaga badisay West Ham garoonka Emirates Stadium si ay Gunners ugu soo baxdo afarta sare ee Premier League.
Daqiiqadii 48-aad ee ciyaarta Martinelli ayaa dhaliyay goolkii muhiimka ahaa wax yar ka dib markii dib la isugu soo laabtay, isagoo shabaqa dhex dhigay kubad uu ka helay Lacazette
Gunners ayaa halkeeda ka sii wadatay dadaalkeeda qaybtii danbe ee ciyaarta waxaana rigoore ka qasaariyay Alexandre Lacazette, iyadoo Vladimir Coufal uu helay jaale labaad iyo casaan, laakiin waxaa badbaadiyay goolhayihii hore ee Arsenal Lukasz Fabianski.
Si kastaba ha ahaatee, Smith Rowe oo bedel ku soo galay ayaa goolka labaad u dhaliyay Arsenal Daqiiqadii 87aad ee ciyaarta natiijada ayaana ka dhigan in Arsenal ay soo gasho kaalinta afaraad, iyagoo hal dhibic ka sareeya kooxda ay xafiiltamaan ee London ka dib 17 kulan.
Arsenal ayaa u safri doonta kooxda Leeds United sabtida garoonka Elland Road, halka West Ham ay isla maalintaa marti galin doonto kooxda dhibtooneysa ee Norwich City.
Weeraryahankii hore ee Chelsea Oscar oo xaqiijiyay in Barcelona lasoo Xiriirtay
Farmaajo oo caddeeyey inuu qorsheynayo xil ka-qaadista Ra’iisul Wasaare ROOBLE
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qorsheynaya in xilka laga qaado ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Farmaajo...
Pep Guardiola oo dhaleeceeyay qaab ciyaareedka Manchester City iyagoo 4-0 kaga...
Golaha Bulshada Banaadir oo hanjabaad uga jawaabtay go’aankii maamulka gobolka
Deg deg Qorshe Culus oo Ay wataan Deni Iyo Axmed Madoobe,...
Maxaa ka jira in la kireeyay Tiyaatarkii Qaranka?
Newcastle United oo xiriir ku aadan Pierre-Emerick Aubameyang la sameysay Arsenal